हे राम, फेसबुकको हल्लालाई पत्याउँदै समाचारै लेखेछन् पो! – MySansar
हे राम, फेसबुकको हल्लालाई पत्याउँदै समाचारै लेखेछन् पो!
Posted on December 22, 2015 December 23, 2015 by Salokya
फेसबुकको एउटा पोस्ट सेयर गरेवापत् ४५ लाख डलर पुरस्कार पाउने रे भनी चलेको हल्ला गलत भएको बारे अस्ति नै ब्लग लेखिसकेको थिएँ। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्। तर पनि यो हल्ला फैलन कम भएको छैन। हुँदाहुँदा आर्थिकन्युज नामको अनलाइनले त यसलाई पत्याएर समाचारसमेत लेखी पाठकहरुलाई झुक्याएको छ।
‘फेसबुक पोष्ट शेयर गरेबापत ४.५ मिलियन डलर पाउने’ शीर्षकको समाचारमा ‘आफ्नो उक्त पोष्ट शेयर गरेबापत हजार जना भाग्यशाली प्रयोगकर्तालाई ४.५ मिलियन डलर दिइने जुकेरबर्गले आफ्नो पोष्टमा समेत जानकारी गराएको छ’ भन्ने बिल्कुलै गलत कुरा त्यसमा लेखिएको छ। जुकरवर्गले अहिलेसम्म यस्तो स्टायटस लेखेका छैनन्। समाचार लेख्नेले आफ्नो मनमा आएका कुरा लेख्दैमा समाचार सही हुँदैन।
अरु पनि केही अनलाइनले यही हावा कुरालाई समाचारको रुप दिएका छन्-
यही हावा कुरालाई पत्याउँदै स्टायटस कपिपेस्ट गर्ने थप केही चर्चित मान्छे पनि भेटिएका छन्। अमेरिकाको ह्वाइट हिमाल टेलिभिजनमा सम्प्रेषण नामको कार्यक्रम चलाउने पत्रकार शैलेश श्रेष्ठले पनि २० डिसेम्बरमा यो स्टायटस कपिपेस्ट गरेका छन्
Can't wait to see who the lucky recipients are…According to Good Morning America, Notahoax! Mark Zuckerberg has…
Posted by Shailesh Shrestha on Saturday, 19 December 2015
2 thoughts on “हे राम, फेसबुकको हल्लालाई पत्याउँदै समाचारै लेखेछन् पो!”
Rajendra Dhakal says:
थान्क यौ माइ संसार
धेरै मानिसहरुले सिक्नेछन.
जनचेतनाको लागि माइसंसार लाई धेरै नै धन्यबाद छ
आशा छ यो पढेपछि मान्छेहरुले कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडी कुद्नुको सट्टामा आफ्नो कान छाम्नेछन् ।